मलाई त मुखले गरेर मुखमा नै झारेको देखेर त घिन लागेर आयो । झण्डै मैले उल्टी गरेको , मेरो साथीले त उल्टीनै गर्यो , छया छया ।” उनले भनी । “ए , त्यसो भए कण्डोमा चिकेको पनि हेर्यौ होईन त , त्यसो भए हामी पनि एक पटक गरेर हेरौन त , कस्तो हुन्छ ?” मैले कण्डोमा चिक्ने प्रस्ताव राखे ।“नाई हुन्न , कस्तो कुरा गर्नु भाको , म त गर्न दिन्न । अगाडी गर्दा त कस्तो दुख्छ झन पछाडी गर्दा के हाल होला ? म त मर्छु होला ।” उनले विरोधाभाष पूर्ण उत्तर दिई । ” ल ल , अगाडी नै गर्छु नि त ।” भन्दै उनलाई पलङ तिर लगे ।
टी-शर्ट र पेण्टी मात्रै लगाएको अनिताला पलङमा सुताउदै किस गर्न थाले । बिस्तारै बिस्तारै उसको सबै लुगा खोलिदिएर नाङगै बनाए । मैले पनि हतार हतार आफ्नो सबै लुगा खोलेर उनी माथि चढे । केहि बेर किस गर्दै दुधको पोका माड्दै उनको पुतीमा मेरो लाडो छिराए । यसपाली भने उनलाई त्यती दुखेन छ क्यार त्यती कराईन । पुती पनि पुरै रसाएकोले गर्दा होला , लाँडो छिर्न त्यती गाह्रो भएन । बानी परिसकेकोले होला, अनिताले मुनिबाट मच्ची मच्ची साथ दिन थाली । रसाएको पुती चिक्न एकदमै आनन्द आई रहेको थियो । “आहहहहह , ओहहहहहह, आहहहहह, अझे कस्सेर गर्नुन , मजा आईराछ , प्लिजजजजजज , अझै , अझै ” अनिताले आनन्दका साथ कराउन थाली । करीब १० मिनेट जति चिके पछि , उनको पुतीबाट लाँडो झिके अनि उनलाई घोप्टो पारे । मेरो लाँडो ठन्केर खपि नसक्नु भाथ्यो । अनि कुकुरले जस्तै गरि पछाडी बाट चिक्न थाले । छाँटिएको कम्मर च्याप्प समातेर अगाडी पछाडी गर्दै बल गरी गरी चिक्न थाले । यसरी चिक्दा अनितालाई दुखेछ क्यार , “बिस्तारै बिस्तारै गर्नु न , दुख्यो ।” अनिता कराउन थाली । उसको चिच्याहटको वास्तै नगरी दनादन चिक्न थाले । करीब ५ मिनेट जति चिके पछि , मेरो चोर औला बिस्तारै अनिताको कण्डोको दुलो निर लगे र बिस्तारै बिस्तारै छिराउन थाले । “छ्या के गरेको , त्यहाँ नचलाउनु न , काउकुति लाग्यो क्या ” अनिताले विरोध जनाई । “एकैछिन न , म बिस्तारै गर्छु क्या ” मैले सम्झाउन थाले ।अनिता चुपचाप बसी रही , म चाँहि पुतिमा चिक्दै कण्डोको दुलो भित्र औला छिराउन कोशिस गर्न थाले । बल्ल बल्ल चोर औला छिराए । मनमनै सोँच्न थाले “आज त जसरी भए पनि कण्डो चिकेरै छाड्छु ।” केहि बेर पश्चात मैले औला निकाले र कण्डोको दुलोमा थुक लगाए । अनि फेरि औला छिराए । “अनिता तिमी सँग ओठमा लाउने भ्यसलिन छ ?” मैले सोधै । “छ , ब्यागमा छ ” उनले भनी । उनलाई पलङमै छाडेर म उसको ब्याग भए तिर लागे । उसको ब्यागमा ओठमा लाउने भ्यासलिन भेटाए र लिएर फेरि पलङ तिर लागे । अनिता घोप्टो परेर बसीराथी । आधा जति भ्यासलिन निकालेर अनिताको कण्डोको दुलोमा दलिदिए र दुईवटा औला छिराउन कोशिस गरे । भ्यासलिनले गर्दा होला , स्वात्तै छिर्यो । “अनिता , म बिस्तारै मेरो लाँडो तिम्रि कण्डोको दुलोमा छिराउँछु ल , एकै छिन सहनु ल ।” मैले भने । “बिस्तारै हाल्नु है , दुख्यो भने निकाल्नु नि फेरि ” अनिताले रुञ्चे स्वरमा जवाफ फर्काई । “ल ल हुन्छ ” भन्दै मैले बिस्तारै मेरो लाँडो उसको कण्डोको दुलो निर लगे । भ्यासलिनले चिप्लो भएको दुलोमा मेरो रन्केको लाँडो बिस्तारै छिराउन कोशिस गरे । अलि गाह्रो गाह्रो भयो , १ ईञ्च जति बल गरेरै छिराए । “ऐया दुख्यो , निकाल्नु निकाल्नु , मरे आमा ” अनिता कराउन थाली । हत न पत लाँडो निकालेर भएभरको सबै भ्यासलिन मेरो लाँडो भरि दले र फेरि छिराउन थाले । “एकै छिन सहन यार , एक पटक छिरे पछि त मजा आउन थाली हाल्छ नि ।” मैले सम्झाउँदै अनितालाई भने । उनी चुपचाल बसी रही । मौका यही हो भनेर अलि बल गरेर मेरो लाँडो कण्डोको दुलोमा छिराउन थाले । भ्यासलिनले निकै काम गरेछ , पुरै लाँडो त स्वात्तै छिर्यो । “ऐया मरे आमा ” अनिता रुन थाली । “नरोउन डार्लिङ , अब छिरी सक्यो त , अब दुख्दैन के ” सम्झाउदै किस गर्दै भने र बिस्तारै बिस्तारै लाँडो भित्र बाहिर गर्न थाले । उनी चुपचाप बसी र सुँक्क सुँक्क गर्न थाली , म चै बिस्तारै बिस्तारै कण्डोमा चिक्न थाले । दुलो सानो भएकोले होला , लाँडोलाई च्याप्प समाएर छोले जस्तो महसुस भई रहेको थियो । यसरी कण्डोमा चिके जस्तो मजा त अहिले सम्म मैले महसुस नै गरेको थिईन ।अब अनितालाई पनि दुख्न छाडेछ क्यार , उनी चुपचाल आफ्नो कण्डो अगाडी , पछाडी गरी रही । म पनि स्वर्गको अनुभुती गर्दै बल गरी गरी कण्डोमा चिक्न थाले । करीब १० मिनेत जति चिकेपछि मेरो लाँडोले माल छाड्ने बेला आयो , अनि हतार हतार लाँडोलाई बाहिर निकाले अनि अनितालाई उत्तानो पारे उसको मूख भित्र लाँडो छिराएर सबै माल उसको मुख भित्र झारे । भएभरको सबै माल अनिताले ओकलि अनि उत्तानो परेर आँख चिम गरेर पल्टी रही । म पनि थाकेर लोत भाकोले उसकै छेउमा पल्टे । केहि बेर किस गरे अनि दुध माड्दै बसे । “नया एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त डार्लिङ ” मैले सोधे । “मजा त आयो तर दुखि राछ , अब एकछिन यतिकै बसौ ल , मलाई त हिड्न नै गाह्रो होला जस्तो छ । तपाई त जिद्धी मान्छे है , आज मलाई कण्डोमा पनि गरेर छाड्नु भो है ।” रुञ्चे स्वरमा अनिताले भनि । “अनि के भो त , रमाईलो गर्ने मजा लिने भनेको यस्तै त हो नि , सँधै एउटै तरिकाले गरेर पनि मजा आउँछ त लाटी ।आई लभ यु डार्लिङ ” भन्दै दुध माड्दै किस गर्न थाले । उनी पनि मलाई किस गर्न थाली , यतीकैमा कति बेला निदाईएछ , झसँग व्युझिदा ४ बजि सकेको रहेछ । हतार हतार लुगा लाएर हामी निस्कयौ , अनितालाई बानेश्वर छाडे र म घर तिर लागे। Tweet
Nepali Sex With Bhauju कम्पनी को क्वाटर मा छिमेकी भाउजु लाई चिकेको कथा !	चाक चाहिँ भर्जिन रहेछ – Nepali Sex Story	ताराको पुतिमा छिरायो	About The Author